XOG Culus:Kheyre iyo Fahad Yasiin oo caawa aad oga xumaaday arin soo gaartay oo ah…. | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA XOG Culus:Kheyre iyo Fahad Yasiin oo caawa aad oga xumaaday arin soo...
XOG Culus:Kheyre iyo Fahad Yasiin oo caawa aad oga xumaaday arin soo gaartay oo ah….
Warar lagu kalsonaan karo aan caawa heleyno ilo u dhow dhow ra’isulwasaaraha dalka iyo taliyaha nabad sugida qaranka ayaa shegaayo in siweyn oga xumaadayn hadalkii kasoo yeeray wasiir ku-xigeenkii wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdikariim Khaliif Dhalac.
Cabdikariim Khaliif Dhalac ayaa kudhawaaqay in oo iska casilay xubinimada xukumada Xasan Cali Kheyre oo hogaamiyo kasoo ku sababeeyay in farogelin xoogan ku heyso maamulka oo asaga kasoo jeedo.
Ra’isulwasaaraha iyo taliyaha nabad sugida qaranka balse dad gaar ah u yaqanaan milkiilaha dowlada ayaa lasheegay in caawa siweyn oga xumaadayn hadalka kasoo yeeray wasiirkaas oo ahaa in farogelin xukumada iyo laamaha kale ee dowlada ka wadaan galmudug.
Isku soo wada duub wasiir ku-xigeenkii wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdikariim Khaliif Dhalac ayaa ku dhawaaqay in isaga tagay xubinimada golaha wasiirada.
Next articleIs Casilaadii Wasiir katirsan Xukuumada Soomaaliya oo la bogaadiyay !!
Madaxweyne Geelle oo umadda Soomaaliyeed u sheegay war aad kaga Farxiyay…
Shirkad Caalami Ah Oo Shaacisay Qorshaha Soomaaliya Ee Shirka Shidaalka Ee London
KASHIFAAD: Sababta dhabta ah ee uu isku casilayo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya
BIG NEWS:DF oo wadda qorshe ay Turkish iyo Eritrean ku beddelayaan AMISOM &xogo shegaayo in…